किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्ने गर्छ ? - बडिमालिका खबर
एजेन्सी — के तपाईंले जुनकिरी देख्नु भएको छ ? देख्नु भएको छ भने अवश्य तपाईंले त्यसको जीउमा कहिले बल्ने र कहिले निभ्ने बत्ती पनि देख्नु भएको छ होला । विशेष गरेर स–साना केटाकेटीहरु त्यसको अनौठो बत्ती देखेर आकर्षित हुने गर्छन् । त्यही भएर उनीहरु त्यसलाई पक्रेर बोतलमा राख्न वा हातले समाउन मन पराउँछन् । जुनकिरीले हामी सबैलाई अचम्ममा पारेको छ । वैज्ञानिकहरु पनि त्यसको शरीरमा हुने अनौठो क्रियाकलापको बारेमा धेरै लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छन् । वास्तवमा जुनकिरीको जीउमा बल्ने बत्ती हाम्रो घरमा हुने अन्य बत्तीहरु जस्तै नै हो । फरक यति मात्रै छ कि अरु बत्तीहरु बल्दा ताप उत्पन्न हुन्छ तर जुनकिरीको बत्ती भने तापबिना नै बल्ने गर्छ । यसरी उत्पन्न हुने विशेष खाले प्रकाशलाई ‘ल्यूमिनेसेन्स’ (Luminescence) भनिन्छ । जुनकिरीमा यस्तो प्रकाश ‘लुसिफेरिन्’ (Luciferin) नामक तत्त्वको कारणले उत्पन्न हुने गर्छ । यो तत्त्व अक्सिजनसँग मिलेर प्रकाश उत्पन्न गर्ने गर्छ ।
तर प्रकाश उत्पन्न गर्ने यो प्रक्रिया ‘ल्यूसिफेरेज्’ (Luciferase) नामक अर्को तत्त्व नभएसम्म सम्भव हुँदैन । ल्यूसिफेरेजले यो रासायनिक प्रक्रिया पूरा गर्न मद्दत गर्छ तर आफू स्वयम् भने यो प्रक्रियामा संलग्न हुँदैन । जुनकिरीको शरीरमा यी दुबै तत्त्वहरु हुने गर्छन् । लुसिफेरेजले लुसिफेरिनलाई अक्सिजनसँग मिलेर बल्नमा मद्दत गर्छ ।
अहिले वैज्ञानिकहरुले यस्तै प्रकाश प्रयोगशालामा उत्पन्न गर्न सफल भएका छन् । तर प्रकाश उत्पन्न गराउन चाहिने रसायन भने उनीहरुले आफैं प्रयोगशालामा बनाउन सक्तैनन् । त्यही भएर यसमा चाहिने समाग्रीहरु जुनकिरीबाट नै लिनुपर्छ । ती रसायनहरु कसरी बन्छन् भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरुले अझै पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यो अहिले पनि प्रकिृतिको एउटा नसुल्झिएको रहस्यको रुपमा रहेको छ ।
जुनकिरीले यस्तो प्रकाश किन उत्पन्न गर्छ त ? यो प्रश्न पनि तपाईंहरुको मनमा उठ्न सक्छ । यसको बारेमा वैज्ञानिकहरुले विभिन्न विचारहरु प्रस्तुत गरेका छन् । कसैले उनीहरु आफ्नो जोडी खोज्नका लागि यस्तो प्रकाश उत्पन्न गर्ने गर्छन् भनेका छन् । कसैले भने तिनीहरुले राती सिकार गर्ने चराहरुलाई तर्साउन त्यसो गर्ने गरेको कुरा अघि सारेका छन् । यसले तिनीहरु त्यस्ता चराहरुको आहारा हुनबाट बच्ने कुरा पनि बताएका छन् । अझ कसैले त यो केवल रसायनिक प्रक्रिया मात्र हो भन्ने विचार अघि सारेका छन् । यसको पछाडि कुनै पनि उद्देश्य छैन भन्ने उनीहरुको विचार रहेको छ । प्रकाश उत्पन्न भएर न त जुनकिरीलाई फाइदा गर्छं न त हानि नै गर्छ । यसले तिनीहरुको शारीरिक प्रक्रियामा कुनै ठूलो भूमिका नखेल्ने कुरा पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
तर माथिका कुराहरु तर्कका रुपमा मात्र रहेका छन् । जुनकिरीले बत्ती बाल्नुको ठोस कारण अझै पनि वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यसको पछाडि अरु नै रहस्य रहेको अनुमान वैज्ञानिकहरुले गरेका छन् ।
कारण जे भए पनि जुनकिरीको बत्तीले हामी सबैलाई रोमाञ्चित पारेका छन् । तिनीहरुलाई हेर्दा हाम्रो मनमा विशेष आनन्द आउँछ । तिनीहरुले रातको वातावरणलाई पनि रमाइलो बनाइदिन्छन् । त्यही भएर होला, कविहरुले पनि तिनीहरुको बारेमा थुप्रै कविता लेखेका छन् । Title Photo: https://qph.fs.quoracdn.net
एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६ काे उत्कृष्ट देउडा गायिकामा शाेभा थापाले जितिन्
बुढिनन्दा नगरपालिकाले अनुगमन र भम्रणमा एक बर्षमै ४९ लाख झ्वाम
अस्पतालको अतिक्रमीत जमीनमा डोजर लगाइयो
उठिबास लगाउने ‘विकास’
अनेरास्ववियु बाजुरा जिल्ला कमिटीले लगायो एकताको टुगों (सुचि सहित)
भाइरल प्रभाबित क्षेत्रमा हिड्यो डाक्टरको टोली
पत्रकार प्रेम रौलेमाथी नेपाली कांग्रेस कार्यक्रताद्बारा पार्टी कार्यालयमै कुटपिट
दुई वर्षको बच्चालाई बालुवामा गाडेर दम्पत्तिले रोमान्स गरेपछि…
अब विहे गर्नु पहिले ३ महिनाको तालिम लिनुपर्ने
२० वर्षका युवकले ६० वर्षकी महिलासँग बिहे गरे
२६ वर्षीय शिक्षिका १४ वर्षीय आठ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसंग भागेपछि
श्रीमानको बाँडफाँटः श्रीमती–प्रेमिकासँग ३–३ दिन बस्ने, एक दिन छुट्टी पनि
१०१ वर्षमा बच्चा जन्माउने महिला
विद्यार्थी संगठनहरुलाई उपकुलपति,शिक्षाध्यक्ष,रजिस्ट्रार चाहियो वा स्वबियु निर्वाचन?-नेता रावल
अछाममा जीप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भिर
ट्याक्टर दुर्घटना अपडेट : चालकसहित ९ जना घाईते (नामसहित)
टुप्लुक्क मन्त्री प्रकाश शाह घरको दैलाेमा पुग्दा
गाउँ-गाउँमा करोडौका योजना आए पनि रोजगारी पाईएन्
सरकारी कागजात किर्ते गर्ने बाजुराका तीन जनासहित चार पक्राउ
बाजुराका १८ हजार बालवालिकालाई दादुरा–रुबेला बिरुद्धकाे खोप लगाईने
राष्ट्रपति सहभागी हुने सुदूरपश्चिमका ८ कार्यक्रम (तालिका सहित)
बाजुरामा हान गठन गरियो
उखु खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकलाई विउ वितरण
त्रिबेणी नगरपालिकामा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु